Irabha roller, irabha Umxhubi, irabha lokucoca ulwelo-Amandla
Jinan Power ngerabha mqengqeleki Equipment Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobuchule izixhobo irabha mqengqeleki mihla ukudibanisa uphando lwezenzululwazi kunye nemveliso.Funda ngokugqithisileyo
Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya: Umatshini wokuqhekeza irabha, umatshini wokugaya / wokurola, i-CNC ye-cylindrical Grinder, umatshini wokugubungela irabha, njl. Funda ngokugqithisileyo
Xa unomdla kuyo nayiphi na into yethu elandelayo ujonga uluhlu lwethu lwemveliso, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi xa unemibuzo. Uyakwazi ukuthumela i-imeyile ...Funda ngokugqithisileyo
Jinan Amandla erabha roller izixhobo Co., Ltd.
Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, inkampani ayinikelanga kuphela onke amandla ayo kwi-R & D nakwimveliso yezixhobo, kodwa ikwaphanda rhoqo ngobuchwephesha bemveliso egqibeleleyo.
Irabha yamandla Mqengqeleki
Kwiminyaka yakutshanje, inkampani yethu nayo ukwenza igalelo lemveliso ekrelekrele kushishino mqengqeleki mqengqeleki. Imowudi ye-4.0 yemizi-mveliso iya kusetyenziswa kwimveliso yerabha yeroli kungekudala.
Ngerabha mqengqeleki Precision High zezindlu Gr ...
Jinan Power ngerabha mqengqeleki Equipment Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobuchule izixhobo irabha mqengqeleki mihla ukudibanisa uphando lwezenzululwazi kunye nemveliso. Yasekwa ngonyaka ka-1998, le nkampani yeyona ndawo iphambili ekuveliseni izixhobo ezizodwa zerabha e China. Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, inkampani ayinikelanga kuphela onke amandla ayo kwi-R & D nakwimveliso yezixhobo, kodwa ikwaphanda rhoqo ngobuchwephesha bemveliso egqibeleleyo.
Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya: Umatshini wokuqengqa irabha, umatshini wokugaya / wokugaya, i-CNC ye-Cylindrical Grinder, umatshini wokugubungela irabha, umatshini wokurola irabha, isixhobo sokulinganisa ngobuchule, njl.
Jinan Qiangli ngerabha mqengqeleki Equipment Co., Ltd. ligxininisa ekwenziweni izixhobo irabha mqengqeleki, kunye isikali imveliso olomeleleyo. Ngamandla obuchwephesha obunamandla kunye namava atyebileyo aqokelelweyo, zonke iintlobo zezixhobo ziye zavunywa ngamxhelo ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Iimveliso zithengisiwe kumazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi liphela kubandakanya iMelika, iJamani, uMzantsi Korea, uMzantsi Afrika kunye neBrazil. Ngokomgangatho, itekhnoloji, kunye namava, uJinan Qiangli Irabha roller Izixhobo Co., Ltd. uye waba yinkokeli kushishino izixhobo irabha mqengqeleki kwaye kwinqanaba ngamazwe.
Iimveliso eziveliswe yinkampani zibandakanya: iirabha zerabha ezizenzekelayo kunye nomatshini wokugubungela, irabha yokugungxula ekhethekileyo yerabha, imisebenzi emininzi ye-CNC ye-cylindrical grinder, isixhobo sokujonga izixhobo zerabha ekhethekileyo kunye nentloko ekhethekileyo yokusila kwirabha yerabha. Ezi mveliso zingasentla ziphumelele amabhaso emveliso kazwelonke okanye ephondo ezisibhozo kunye neembasa ezintathu zophando lwezenzululwazi kwiPhondo laseShandong. Ngo-2002, imveliso yadlula ukuhlolwa CCCC Umgangatho Centre kunye ISO9001: 2000 isiqinisekiso inkqubo esemgangathweni yesizwe. Ngo-2013, yafumana inkxaso ekhethekileyo kuphando lwezenzululwazi kunye nobuchwepheshe kunye nophuhliso kwiSithili Shizhong, Jinan, waza waqalisa ukuseka irabha mqengqeleki izixhobo zokusebenza zobunjineli. Zisebenzisa izixhobo zethu, iinkampani zinokuphucula kakhulu ukusebenza kwemveliso, ziphucule umgangatho wemveliso, zonge iindleko, kwaye zizise izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kubasebenzisi.
Inkampani ibambelela kumgaqo "womthengi kuqala", iphuhlisile kwaye yavelisa iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zerabha yokuvelisa, eyonelisayo kwaye yaphumelela indumiso evela kubasebenzisi. Inkampani iyakwenza izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kakhulu kwiiyunithi zabasebenzisi ezinomfanekiso olungileyo wobuchwephesha, inkonzo ekumgangatho ophezulu, itekhnoloji ebalaseleyo, kunye namaxabiso afanelekileyo.